admin December 26, 2018 Environment
Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka. Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Dastuurka Ku-Meel Gaarka. La Ansixiyey August 1, Muqdishu, Soomaaliya. 10 Apr Dastuurka Cusub: Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa madaxa.
Author: Voodook Nek
Golaha amaanka ee qaramada midoobay wuxuu cadeeyey walwal uu ka qabo in xukuumadda kmg ee somalia ay dib ug dhacday jadwalkii bishii ahaa in bisha August dalku uu yeesho dawlad rasmi ah oo joogta ah. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha inta dacwaddiisu ka dhammaaanayso.
Shirweynaha qaran ee soconayo muddo seddax maalmood ayaa ah bilowga geeddi-socod looga gol leeyahay in Soomaaliya loo yeelo dastuur cusub kaasi oo beddeli doono Dastuurka Ku-meel gaarka ah oo ay isku raaceen ergo oo ka tirsan Golaha Ergooyinka Qaranka.
Dastuurka Soomaaliya oo dhamaad ku dhow 16 Maajo Shirkaan waxaa ka soo qaybgaley xubnaha baarlamanka, culimada, bulshada rayidka iyo bah-wadaagta caalamiga ah. Musharraxiinta jagada madaxweynuhu waaa in ay soo magacaabaan qofka ay u xusheen somlaia madaxweyne ku-xigeenka kaasoo noqonaya madaxweyne ku-xigeen haddii uu guuleysto musharraxa soo magacaabay, haynayana xilka madaxweyne-ku-xigeenka mudada uu madaxweynuhu hayo xilka madaxweynaha.
Mudane Khaire ayaa sheegay in loo baahan yahay in la dhameystiro geeddi-socodka dastuurka si dalka loo mideeyo, sarena loogu qaado kobaca dhaqaalaha iyo in la soo saaro dukumeenti cusub oo la isticmaali doono mustaqbalka. Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa. Qodob kale oo Warar ah. Safiirada qaramada midoobay u fadhiya dalalka USA, UK, Dastuudka iyo Germany iyo ergeyga UN ee somalia iyo madaxweynaha dawladda KMG ee somalia intuba waxay isku raaceen in taageerada caalamku ay shardi u tahay sidii loo gaari lahaa bartilmaameedka August.
Cutubka 4aad Waajibaadka Jamhuuriga ah. Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Qodobka aad-Habka Iscasilaadda Madaxweynaha. Cutubka 6aad Matalaadda Shacabka. Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo, shaqada xafiiska laga joojiyo, ama laga qaado xilka, madaxweyne ku-xigeenku wuxuu haynayaa xilka madaxweynimada sida ku xusan qodobka Latest News English Somalia to develop a national communication strategy on preventing and countering violent extremism – Bisha Tobnaad 17, Zahra Maxamed Axmed, oo ah haweenay u dhaqdhaqaaqdo xuquuqda haweenka, ayaa guddiga dib-u-eegista dastuurka ka codsatay in ay xaqiijiyaan in qoondada haweenka ee boqolkiba 30 la dhowro isla markana xuquuqda dadka naafada ah la wanaajiyo.
Cutubka 5aad Dhul, Hanti iyo Degaan. Cutubka 14aad Maaliyadda Guud. Cutubka 12aad Heerarka kala Duwan ee Shaqaalaha dowladda ee Rayidka. Su’aal la xiriirtay in waqtigu gabagaba yahay isla markaasna uusan meesha ka muuqan dastuur weli dayaar ah wasiirku wuxuu sheegay inaysan wanaagsnayn in hawl noocan oo kale ah degdeg ah lagu dhaafo arrintuna tahay mid u baahan in degganaan iyo ka fiirsi badan lana mariyo hannaanka ay u baahan tahay ee sharciga ah.
Madaxweyne ku-xigeenka haddii uu geeriyoodo, iscasilo ama xilka laga qaado A fhayeenka Golaha Shacbiga ayaa la wareegaya xilkiisa. Madaxweynuhu wuxuu iscasilaadiisa u gudbinayaa Golaha Shacbiga isagoo sii marsiinaya Afhayeenka Golaha Shacbiga. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha. Cutubka 7aad Qaab-Dhismeedka Federaalka ee Jamhuuriyadda.
Qodobka aad-Awooda Madaxweynaha Awoodaha madaxweynaha waa: Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka. Qodobka aad-Xilka Madaxweyne Ku-xigeenka 1 Madaxweyne ku-xigeenka wuxuu caawiyaa madaxweynaha, wuxuu noqodaa sii hayaha jagada madaxweynaha marka Madaxweynahu dalka uga maqanyahay dibada ama ay ku timaado sabab uu u gudanwaayo xilkiisa.
Soomaaliya waxa haatan lagu xukuma Dastuur ku meel gaar ah, oo la ansixiyay 1-dii, Agosto, ki kaddib dhowr sano oo ay socdeen colaado.
Inta uusan hawsha bilaabin Madaxweynaha Jamahuuriyaddu wuxuu marayaa dhaarta ku xusan sharciga, waxaana lagu hor dhaarinayaa xaflad ka dhacaysa fagaare dadweynuhu joogaanwaxaana dhaarinaya Guddoomiyaha Maxkamaada Dastuuriga. Nambarada qodobada hoose waxay la socodaan numbarada qodobada baarlamentaariga.
Haddii uusan jirin madaxweyne-ku-xigeen ama madaxweyne-ku-xigeenku uusan awoodin in uu qabto xilka, afhayeenka Golaha Shacabka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha 1 Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Qodobka aad-Muddada Xaafiiska Madaxweynaha iyo Madaxweyne-Ku-Xigeenka Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay haynayaan xafiiska ugu badnaan labo xili oo midkiiba uu yahay 5 sano. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska 2 Madaxweynuhu marka uu dhisayo Golaha Wasiirrada waa in uu tixgeliyaa qaybaha ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed.
Haddii musharraxa uu soo jeediyo xisbi, magacaabistiisu waa in ay taageeraan ugu yaraan hal laan oo ka mid laamaha xisbiga ee ku yaalla dawlad-goboleed kasta. Qodobka 98aad-Xil-ka-qaadista Madaxweynaha 1 Madaxweynaha Jamhuuriyadda waxaa xilka looga qaadi karaa oo keliya marka uu ku xadgudbo dastuurka, ku tagri-falo awooda xafiiska somzlia uu galo khiyaamo qaran. Qodobka aad-Dhaarta Wasiirada Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga waxay marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Mogadishu, 13 Maay — Soomaaliya ayaa maanta shirweyne qaran oo ka dhacay magaalada Muqdisho ku daah-furtay geeddi-socodka dib-u-eegista dastuurka.
Cutubka 1aad – Baaqa Jamhuuriyadda. Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa sheegay inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli jiraan talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee somapia iyo saxiixayaasha Road mapka. Cutubka 9aad Laanta Fulinta ee Federaalka.
Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka badnayn 23 xubnood oo ay dasuturka jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal.
Wasiirka oo BBC-da u warramay ayaa tilmaamay in go’aanka ugu dambeeya ee dastuurka uu iska leeyahay golaha ansixinta hase ahaatee marka hore guddiga madaxa bannaan iyo guddiga khubarada ay soo dhammaystiraan hawshaas oo uu wasiirku sheegay in xilligan ay soo afjarantay ayna hartay oo keliya talooyinkii madaxda sare iyo saxiixayaasha Road mapka oo keliya markaa kadibna dastuurku u gudbi doono golaha ansixinta.
Soomaaliya oo daah-furtay geeddi-socodka dib-u-eegista dastuurka ka hor doorashooyinka 2020-ka
Lahaanshaha sawirka a Image caption Dastuurka Somalia Wasiirka dastuurka ee dawladda federalka Somaliya Cabdiraxman Xoosh Jibriil ayaa somaliz inay meel gabagaba ah marayso hawsha dastuurka inkastoo uu tilmaamay inay weli somaia talooyin iyo faallooyin ay dastuurka ku yeeshaan madaxda sare ee dawladda iyo saxiixayaasha Road mapka. Golaha Wasiirrada marka ay helaan kalsoonida Golaha Shacbiga somaliq marayaan dhaarta ku xusan sharciga, waxaana ku hor dhaarinaya fadhi gaar ah ee Golaha Shacbiga Gudoomiyaha Maxkamada Dastuuriga.
Haddii la qaato nidaamka madaxweynennimada nambarada qodobbada hoose way is badalayaan. Cutubka 3aad Xuquuqda Aas-aasiga ah. Haddii qofna shuruudahaas buuxin waayo waxaa la tartansiinayaa labada musharrax ee helay tirada ugu badan codadka la bixyay.
Odayaashu waxay sheegeen inay magaalada Garowe ugu laabteen wadatashi inkastoo aanay si rasmi ah u sheegin waxa ay saluugeen haddana waxa muuqata inay ka biyo-diideen habka uu u socdo maamulka shirwaynaha odayaasha ee daastuurka socda Muqdisho.
Cutubka 15aad Sugidda Nabadda iyo Ammaanka Qaranka. Wassiirka la magacaabay haddii uu xubin ka yahay labada Aqal midkood ama uu hayo xil guud ama mid gaara ah, waa in uu iska casilaa kursigiisa 90 casho gudahood kadib markii loo dhaariyo xafiiska.